Galmudug oo Amartay in la soo xiro Nin u Gafay Nabigeena Muxamad NNKH – XAMAR POST
Galmudug oo Amartay in la soo xiro Nin u Gafay Nabigeena Muxamad NNKH
By Mohamed Ahmed On Sep 19, 2017
Ciidamada maamulka Galmudug ayaa amar lagu siiyay inay soo xiraan nin lagu magacaabo C/wali Afyare Cali oo ku sugan Koonfurta magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug.
Ninkan ayaa waxaa lagu eedeeyay muuqaal sawir ah oo ku soo bandhigay magaalada Gaalkacyo uu ku sheegayay in uu yahay Nabi Muxamad (NNKH).
Wasiir Ku xigeenka Wasaaradda Amniga Galmudug Mahdi Xasan Maxamed ayaa laamaha amniga ku amray in ay soo xiraan ninkaasi aanu ku tilmaami karin inuu wadaad yahay, balse uu ku sifeeyay in uu yahay Sheydaan.
Mahdi Xasan Maxamed ayaa dadka baraha bulshada ku sii faafinaya sawirka uu ninkan soo bandhigay ugu baaqay in ay joojiyaan faafinta sawirkaasi, wuxuuna ka codsaday in aysan ninkaasi ku garab istaagin qaladka uu galay.
Dhanka kale Wasiirka Diinta & Awqaafta Galmudug, Mursal C/raxmaan Axmed ayaa diin ka bax ku sheegay tallaabadii uu ku dhaqaaqay wadaadkaasi, wuxuuna tilmaamay in arrintani ay tahay mid loogu gafaayo Diinta Islaamka, isla-markaana ay tahay wax aan sal iyo raad toona lahayn.
Ururka Shabaab oo soo Bandhigay Magacyada & Sawirrada Rag Reer galbeedka la shaqeeya
XASAASI: Koonfur Galbeed oo Qiil aan la Fileyn u yeeshay inay Taageeraan Xulufada Sacuudiga
Soomaaliya & Shiinaha Oo Kawada hadlay Arinta Gar gaarka Bini’aadanimada
DHAGEYSO: Hanjabaada B/Caalamka waxay bad baadineysaa Soomaaliya,sida waxa…
Wasiir Beyle Oo Xog Kusaabsan Dhaqaalaha Dalka siiyey Dalal…